अमेरिकामा बालिकामाथि एक हजार जनाले गरे बलात्कार ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अमेरिकामा बालिकामाथि एक हजार जनाले गरे बलात्कार !
प्रकाशित मिति २६ चैत्र २०७५, मंगलवार १२:०० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । नियमित रुपमा संसारबाट यौन शोषण भएको घटना आउने गरेको छ । जसमा केही त यस्ता घटना हुन्छन् कि हामीलाई मानव भन्न पनि लाज लाग्छ । यस्तै एक घटना दुई वर्षअगाडि अमेरिकामा घटेको छ । जहाँ पेन्सिलवेनियाको फिलाडेल्फियामा एक बालिकालाई बन्धक बनाएर उसका साथमा १ हजार जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको खबरले सनसनी मच्चाएको छ ।
पीडित त्यो समय १४ वर्षकी थिइन् । उनले आफ्नो जिन्दगी २ वर्ष नरकमा बिताइन् । जब उनी दरिद्रको जालबाट छुटेर आइन् तब खुल्यो वास्तविक रहस्य । उनलाई मुक्त गर्नका लागि परिवार र प्रहरीले सहयोग गरेका थिए । प्रहरीले यो घटना दर्ता गराएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
एक अमेरिकी पत्रिकाकाअनुसार त्यो समय १४ वर्षीया बालिका आफ्ना बाबुआमासँग झगडा गरेर घर छोडेर निस्किएकी थिइन् । यसपछि उनी मानव तस्करको पञ्जामा परिन् । उनलाई तस्करले एक होटलमा बन्धक बनाएर राखेका थिए । उक्त होटलमा घण्टाको हिसाबले ग्राहक आउँथे र बालिकासँग जर्बजस्ती सम्बन्ध राखेर जान्थे ।
आश्चर्यजनक कुरा त यो थियो कि धन्दामा लागेका व्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्थे र ग्राहकहरु सम्पर्क गरेर होटलमा आउँथे । होटलका मालिक पनि यस घटनामा जोडिएका छन् ।
जब बालिका यी तस्करको चंगुलबाट मुक्त भएर प्रहरीलाई यो कहानी सुनाइन तब प्रहरी पनि चकित परेको छ । बालिकाले आफ्नो बयानमा २ वर्षमा १ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले शारीरिक सम्बन्ध राखेकाे दाबी गरेकी छन् ।
नगरपालिका अनियमितताको दलदलमा: कागजमा धमाधम सिध्याईंदै बजेट
रौतहट । स्थानिय तहको निर्वाचन हुनुपुर्व जव स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु पदाधिकारी नभएको अवस्थामा जसरी स्थानिय तहका सचिव वा प्रमुख कार्यकाकारी…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएकै दिन भारतीय अखबारहरुले चीनले नेपालमा बाँध बनाएर उत्पादन गर्ने बिजुली भारतले…
आगामी वैशाखमा नेपालले यसरी प्रक्षेपण गर्दैछ आफ्नै भूउपग्रह
काठमाडौ। नेपालले आगामी वैशाखमा आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका…
सरकारभित्रै ‘जनसत्ता’ विवाद उत्कर्षमा, अव के हुन्छ ?
दाङ । माओवादीले द्धन्दकालीन समयमा खडा गरेको जनसत्ता ले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ…
काठमाडौं । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा भएसँगै नेपाल प्रहरीमा रोकिंदै आएको जवानदेखि एआईजीसम्मको बढुवा प्रक्रिया सुरु…
डियर कमरेड से नो टु एमसीसी 58 views